Xafladda 20-sano Guuradii kaso wareegtay Aas aska Puntland oo mardhow bilaabanaysa – Radio Daljir
Xafladda 20-sano Guuradii kaso wareegtay Aas aska Puntland oo mardhow bilaabanaysa
Agoosto 3, 2018 5:11 g 0
Xarunta Jaamacadda PSU ee Garoowe waxaa mardhow ka bilaabanaysa munaasabada loogu dabaal dagayo 20-sano guuradii kaso wareegtay markii Puntland dhidibada loo taagay iyado caawa munaasabada ay ku suganyihiin wafuud kala duwan .
Munasabada waxaa ku sugan Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo RW Xasan Cali khayre kuwaas oo lagu casumay ka qayb galka Munaasabada caawa,sido kale Wafuud heer caalami ah oo iyagu hadalo kala duwan ka jeedin doona intay xafladu socoto.
Dhinaca kale Madaxda ugu saraysa dowladda Puntland ayaa madasha ku sugan oo caawa la filayo inay ka hadlan dhismaha Puntland 20- sano kadib waxaa u qabsoomay iyo Guulaha la gaaray ,dhinaca hormarka,dhaqaalaha ,Amaanka iyo waxbarashadda.
Kooxaha fanaaninta Puntland ayaa goobta ku sugan oo ka qaadi doona heeso kala duwan oo ka hadlaya jiritaanka Dowladda Puntland iyo waxqabadka Madaxda Puntland.
Halkan kalasoco Munaasabadaas iyo masuuliyinta kala duwan ee ku sugan Munaasabadaa
TOOS: Xafladda 1 Ogoosto oo Garoowe ka bilaabatay